Wednesday October 30, 2019 - 09:08:42 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya xuduud beenaadka udhaxeeya gobolka Jubbada Hoose iyo dhulka gummeysiga ku jira ee NFD ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya.
Xoogaga Al Shabaab ayaa xalay weerar xooggan ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ku lahaayeen tuulada Dhajambula oo hoos tagta degmada Dhoobleey kaabigana ku haysa xuduud beenaadka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay dagaal muddo socday kadib ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta saldhiggii ciidanka Melleeteriga Kenya.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in Dhajambuula ay muddo saacada ah ku sugnaayeen xoogaga Al Shabaab, ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay ufirxadeen dhanka dhulka NFD oo aan sidaas uga fogeyn deegaanka la wareeraray.
Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkii cuslaa ee xalay ka dhacay xuduud beenaadka uu gobolka Jubbada Hoose la wadaago dhulka NFD ee kenya gummeysato.